Abakhiqizi be-Angle Chimney Hood - I-China Angle Chimney Hood Factory & Suppliers
Imininingwane: Izinga lokukhipha eliphakeme le-380 m³ / h elinengcindezi yomsindo ophansi we-62dB (A), isivinini se-3 venting, inkinobho-push.
Ukukhanya kwe-LED kuqhubeka kusebenza ngaphezu kwamahora ayi-10,000.
Imininingwane: Izinga Lokukhipha eliningi likhetha ngomsindo ophansi womsindo wemoto Isigaba Sokusebenza Kamandla kusuka ku-D kuye ku-A ++ 3 isivinini sokukhipha ngokulawula kokuthinta nge-1 digiti display.
Uhlobo Olukhethekile Lwe-Glass Angled Hood 720
I-60cm Elegant Full Glass Angled Hood 708
Imininingwane: Izinga Lokukhipha eliningi likhetha ngesisindo somsindo ophansi wensimbi ye-Energy Efficiency Class kusuka ku-D kuye ku-A ++ 3 isivinini sokukhipha esinenkinobho ye-Elektroniki.
Imininingwane: Izinga Lokukhipha eliningi likhetha ngesisindo somsindo ophansi wenjini yamandla we-Energy Efficiency Class kusuka ku-D kuye ku-A ++ 3 isivinini sokukhipha, Isilawuli sokuthinta ngesibonisi se-1 digiti.
I-90cm Auto Open and Close Yakhelwe i-Angled Hood 701
Imininingwane: Izinga Lokukhipha eliningi likhetha ngomsindo ophansi womsindo wenjini yamandla we-Energy Efficiency Class kusuka ku-D kuye ku-A ++ 3 noma kwe-4 isivinini sokukhipha nge-touch control (i-LCD display), Isilawuli kude ongakukhetha.
I-Touch Control Angled Cooker Hood 60cm 736A
Izinga Lokukhipha eliningi likhetha ngemoto yomsindo ophansi womsindo.
Isigaba Sokusebenzisa Amandla kusuka ku-D kuye ku-A ++.